Ahmed Dheere oo Reer SomaliLand oo si cajiib ah uga sheekeeyay – CNN Somali
HomeSomalilandAhmed Dheere oo Reer SomaliLand oo si cajiib ah uga sheekeeyay
October 25, 2020 cnnsomali Somaliland 3
SomaliLand (CNN Somali) Xukuumada Somaliland ee uu hogaamiyo Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ‘maamus qaran’ u sameysay Kornayl Axmed Maxamed Xassan (Axmed-dheere) oo kamid ahaa duuliyeyaashii waday diyaaradihii dagaalka ee dowladdii Millateriga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre.
Axmed Dheere ayaa xiligaasi ganafka ku dhuftay inuu qeyb ka noqdo xasuuqa dadkii Maatada u badnaa ee ka qaxayey duqaymihii ay ku haysay dowladdii KACAANKA Ee Maxamed Siyaad Barre.
Korneyl Axmed Dheere oo hadal ka jeediyay munaasibadaasi, isla markaana ka jawaabayay su’aalo laga weydiiyay go’aankii uu xiligaasi qaatay iyo siduu u arkayay xasuuqaasi ayaa ka waramay siday wax u dhaceen, wuxuuna yiri“Boqolkiiba boqol Xasuuq buu ahaa (wixii ka dhacay Somaliland), keligayna kama War qabo oo Dad badan ayaa ka war qaba arrintaas, diyaaradaha waxa ka tiro badnaa Madaafiicda (lagu garaacayey Hargeysa), laba Habeen baan seexday Hargeysa, xitaa habeennimadii way socdeen Madaafiicdu”.
“Maalintii aan laba Bambo ka qaaday Garoonka ee aan kala baxay halkaa iyo Jabuuti, Magaaladana aan xaaladdeeda ogaa rejo badan ma qabin, haddana Qofka Muslimka ah Rejo kama dhammaato, mar kasta waan aaminsanaa inuu Nasriga Ilaahay imanayo, laakiin wakhtigaa tiiraanyo badan baa niyadayda ku jirtay”.
“Waxa ii daarmay (Saacadda Shidaalka sheegta) 400 litir markay ka hadhsan tahay waa inaad degtaa, markaa waa inaan Ama diyaaradda ka boodaa ama raadsado meel aan diyaaradda ku dejiyo, waxa Ilaahay ii sakhray inaan arko meel badda iyo berigu isku galaan oo siman, sidaas baan ku degay, kalluumaysto ayaan helay, waxa ka dhawayd Magaalada Tajoora, laakiin Kalluumaysatadii ayaa I keenay Jabuuti, dabadeedna dawladdii Jabuuti si wanaagsan ayay ii soo dhaweeyeen”.
Hoteellada Jowhar oo u hanjabtay AL SHABAAB haddii ay Ergada Doorashooyinka Dajiyaan
Qadra Qaran says:
Ahmed dheere waxa uu ahaa muwaadin jacel dadkiis ha ahaaatee ruux damiir leh kuma dhiiran karo inuu isaga miir qaba dad kiisa duqeeya taariikhda ayaa xusidoonta
Mashaa allaah waa wadani dhab ah misna leh damiir
COUNTRY SOMLILND ARE YOU SEVED YOH